Famaranana nyfaha-25 taona : Hisedra ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny tarika Mage 4 -
AccueilVaovao SamihafaFamaranana nyfaha-25 taona : Hisedra ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny tarika Mage 4
Famaranana nyfaha-25 taona : Hisedra ny lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny tarika Mage 4
07/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Miangaly ny rock milamindamina. Ao anatin’ny famaranana ny faha-25 taonany, hisedra ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasika ny tarika Mage 4, ka manome fotoana ireo mpankafy azy ny alahady 22 avrily izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Mandritra izany seho izany no hamehezan-dry Ken sy ny tariny ny 25 nisian’ny tarika. Ireo mpikambana mandrafitra ny tarika ankehitriny no hiaka-tsehatra amin’io andro io, izany hoe tsy ho avy ireo mpikambana teo aloha izay mila ravin’ahitra any ivelany. Haharitra eo amin’ny ora efatra eo ny fampisehoana ka hiverenana avokoa ireo hira rehetra nanamarika ny fisian’ny tarika Mage 4 niainga tany amin’ireo hira taloha toy ny « Valin’ny ditra » ka hatramin’ireo hira vaovao taty aoriana raha tsy hitanisa afa-tsy ny « sahia minia », « aza hitserana »… Anisan’ireo vokatra farany navoakan’ny tarika entina hampahafantarana ity hetsika ity ny hira vaovao « Lafatra » sy ny famerenana amin’ny endrika hafa ny « Taratasy farany ». Matoky ny tarika fa ho avy hanotrona aryho tonga maro ireo mpankafy. Tamin’ny taon-dasa, tsiahivina, fa fahombiazana ny fankalazana nataon’ny tarika tetsy Antsahamanitra. « Efa fotoana naharitra ihany izay 25 taona nilomanosana tao anatin’ny rock izay, ka vonona ny hanome ny tsara indrindra amin’ny lefiny rehetra izahay mandritra io fampisehoana io », araka ny fanazavan’ny tarika.
Santatra amin’ireo seho ataon’ny tarika Mage 4 amin’ity taona ity io, fa mbola maro ireo fandaharam-potoanan’ny tarika ka ao anatin’izany ny fiverenana etsy Antsahamanitra ny 30 aogositra, any Antsirabe ny 30 septambra ary etsy amin’ny Dôme Ankorondrano ny 30 novambra.